Akụkọ - Jikọtara na ọnọdụ dị ugbu a nke ụlọ ọrụ, anyị kwesịrị ime ya site na nkwụsị ma na-arụsi ọrụ ike
N’April 16, uwe Pinyang natara iwu nke mpempe 3000, nke emere nke ọma na 29th. “Ọnụ ọgụgụ nke iwu a pere ezigbo mpe, ọ chọkwara agba asaa. Ọ na-ewe awa iri na abụọ maka otu agba iji megharịa ya na ụbọchị atọ maka agba asaa. Ọ dịkwa mkpa iji mezue usoro dị iche iche dịka ịkwa akwa na ibi akwụkwọ. N'ikpeazụ, enwere ike ịnye ya na ụbọchị iri na atọ, nke gosipụtara mgbanwe na agility nke mmepụta ụlọ ọrụ.
“N’enweghi mgbanwe ndi n’enwe ya na iche echiche n’Intanet, ihe ndi a apughi ime. Echiche Internetntanetị chọrọ mmekorita iji mejuputa echiche nke nnyefe ụbọchị 7 na usoro ọ bụla. Obere ihe mechiri emechi na-etolite nnukwu mmechi, nke a gbakwunyere n'ichepụta ihe. Imepụta na-agbanwe agbanwe, dịka iberibe ntụ ọka, enwere ike ịgwakọta n'agbanyeghị etu iwu ahụ dị.
Mgbanwe ọ bụghị nanị na e gosipụtara n'echiche nke usoro mgbanwe usoro, kamakwa n'echiche nke njikwa ọrụ. 70% nke ọrụ na ụlọ ọrụ akwa kwesịrị ịbụ mpempe akwụkwọ, ndị ọrụ ga-adịkwa njikere inye nnukwu iwu. Ya mere, na-agbanwe n'ichepụta nwere nnọọ elu chọrọ na management na a ga-akwadebe nzọụkwụ site nzọụkwụ na a obere oge. Uwe na-emepụta uwe ka bụ ụlọ ọrụ na-arụsi ọrụ ike. Ọmụmaatụ, akpaka nri akụrụngwa na dyeing ogbako mma usoro nkenke na ngwaahịa mma. Agbanyeghị, na ụfọdụ njikọ njikọ, ọ gaghị ekwe omume iwepu ọrụ kpamkpam. Ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na ọ dị mkpa maka Intanet mepere emepe ka ọ dị ugbu a. Agbanyeghị, n'ihi ụlọ ọrụ dị iche iche na ọkwa dị iche iche nke ntinye, ọ dị mkpa ijikọ ọnọdụ nke ụlọ ọrụ ugbu a iji mee ya site na nkwụsị ma na-arụsi ọrụ ike.